Fandraisana | Bezzia (Pejy 2)
Ahoana ny fomba hisorohana ny fandaniana tsy ampoizina eo amin'ny toekarena anatiny
Ny fomba tsara indrindra hikarakarana ny toekarena anatiny dia ny fitantanana tsara ny tetibolam-pianakaviana, saingy tsy antoka foana izany ...
Torohevitra fanasana lamba volonondry
Ny fanasana lamba volon'ondry sy hahatonga azy ireo ho lavorary dia zava-dehibe ny fiheverana toro-hevitra vitsivitsy toa ireo avelantsika anao eto ambany.
Ny fanadiovana seza lamba dia zava-dehibe mba hitazomana ny lamba ao an-trano ho simba, maimbo tsara sy tonga lafatra amin'ny haingon-trano.
Omano ny tranonao amin'ny fanao vaovao miaraka amin'ireo torohevitra 4 ireo
Nandritra ity volana septambra ity dia maro amintsika no nanatevin-daharana io fomba io. Fandaharana vaovao izay mazàna ...
Mamitaka hanavao ny fandroana tsy misy asa
Ny fanavaozana ny trano fidiovana nefa tsy misy asa dia mora raha hainao ny manao azy, miaraka amin'ireo hevitra ireo dia hankafizanao ny trano fandroana nohavaozina tanteraka.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny akanjo taloha dia fomba iray hamoronana endrika vaovao, hampiasana indray ny akanjo izay tsy ampiasaina intsony ary hampihena ny dian-tongotra ekolojika amin'ny lamaody.
Fomba famafana ny tonon-taolana
Mba hanafotsiana ny tonon-taolana, ampiasao fotsiny ireo vokatra voajanahary ireo, vinaingitra fotsy, bicarbonate ary ranom-boasarimakirana.
Ny tombony lehibe ho an'ny ankizy manana alika
Jereo hoe inona ny tombony azo amin'ny ankizy alika ao an-trano. Tombony amin'ny fiainanao sy amin'ny fahasalamanao izay tokony ho fantatrao.
Betsaka ny zavatra tsy tokony ho adino rehefa mividy duvet. Atorinay anao izy ireo mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra.
Fetsy 3 hampamofona ny trano
Ny fanaovana fofona tsara ny trano dia resaka rivotra tsara, fanadiovana ary fika vitsivitsy toa ny labozia na voninkazo misy fofona.
Vokatra fahadiovana maharitra sy vegane Espaniola
Izahay ao Bezzia dia ampirisihinay hatrany hampiasa vahaolana fanadiovana maharitra. Miantehitra amin'ny fihenan'ny degreasing sy ny bakteria ...
Efa hifarana ny fahavaratra ary tonga ny fotoana hanary ny akanjonao sy ny kiraronao amin'ny fahavaratra. Ireo torohevitra ireo dia hanampy anao hanamora kokoa.
Taratasy fisaronana fanaka
Ny taratasy handrakofana ny fanaka dia hanova tanteraka ny tranonao. Jereo hoe ahoana no fomba anaovanao azy amin'ny fomba tena tsotra sy haingana.
Fantatrao ve ny mahasamihafa ny daty lany daty sy ny tsara indrindra alohan'ny daty? Ao Bezzia no hanazavana ny ahiahy rehetra anio.
Hevitra 3 deco hanamboarana ny trano amin'ny fararano
Amin'ireny hevitra fall deco ireny dia ho mora sy tsy lafo ny fanavaozana ny endrik'ilay trano mandritra ny vanim-potoana tantaram-pitiavana indrindra amin'ny taona.
Panty fadim-bolana, safidy Zero Waste
Ny panty fadim-bolana no safidy tsara indrindra, maharitra indrindra amin'ny toekarena maharitra sy maharitra amin'ny fikarakarana ny fahadiovan'ny vehivavy,
Ny lesoka 4 mahazatra indrindra rehefa manasa lamba
Ireo no lesoka matetika fanasan-damba, ireo manimba ny akanjonao sy mahatonga ny fitafianao haharitra kokoa. Azonao atao ny misoroka azy ireo.
Trano saka saka namboarina no ho tian'ny biby fiompinao
Raha te-hanao trano saka namboarina ianao dia aza hadino ireo hevitra lehibe avelanay anao. Miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy ary tena tsotra.
Harona sy boaty H&M ao an-trano handaminana ny lakozia
Harona sy boaty ao an-trano H&M dia loharano tena tsara hitahirizana filaminana any an-trano. Manome antsika ...
Fahadisoana 4 an'ny fikambanana ao an-dakozia
Ireto ny lesoka fandaminana mahazatra indrindra ao an-dakozia ary miaraka amin'ireo torohevitra ireo dia azonao atao ny misoroka azy ireo ary manana lakozia tsy lavorary.
Fahadiovana, fandaminana ny saina amin'ny fandaminana ny trano
Ny fahadiovana dia hevitra tsy dia fantatra loatra eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, na dia fomba fanao taloha misy tombony maro aza izy io.
Ny toro-hevitra tsara indrindra hanaovana veloma ny volon'ny saka amin'ny akanjonao
Te-hanala volo saka ve ianao? Jereo avy eo ireo tetika haingana ireo izay hanampy anao hanala azy ireo amin'ny tavy rehetra.
Inona ny IBI? Ny tokony ho fantatrao
Fantatrao ve ny atao hoe IBI? Raha ho lasa tompon-trano ianao ato ho ato, dia fantaro hoe inona ity hetra ity sy ny fomba tokony andoavanao azy.
Zavamaniry anaty trano 5 matanjaka sy voakarakara tsara
Ireo zavamaniry anaty trano ireo dia mahatohitra, mora karakaraina ary ny safidy tsara indrindra hitondra fitadiavana fiainana sy natiora ao an-trano.
Ahoana ny fomba fanaovana pad remover azo ampiasaina azo ampiasaina indray
Mora ampiasaina ao an-trano ny pad remover makiazy azo ampiasaina ary fomba tsotra hampihenana ny fako makiazy.
Ireto tetika ireto hialana amin'ny fofona ratsy ao anaty lalimoara dia tonga lafatra mba hitazomana ny akanjo ho hanitra lava.
Hevitra hanome fiovana mahery vaika amin'ny tile anao nefa tsy manao asa
Te-hiloka amin'ny fiovana mahery vaika amin'ny rindrin'ny tile ianao? Tsia, tsy mila asa ianao fa hanaraka ireo hevitra tena azo ampiharina ireo.
Loharano rano mandeha ho azy ho an'ny saka
Ny saka antsika dia tokony hanana rano velona foana eo am-pelatanany. Ny loharano fisotroana dia iray amin'ireo fitaovana ilaina raisina ...
Ireo fika haingon-trano ireo dia manamarika ny lakile mba hahasambatra kokoa ao an-trano, toerana iray izay tsy isalasalana fa hahatsapa firindrana sy filaminana.
Ahoana ny fomba fanadiovana sy fitazonana ny gorodona vita amin'ny vinina
Amin'ireto torohevitra sy fika tsotra ireto dia azonao atao ny manadio sy mitazona ny gorodona vita amin'ny vinina ao an-tranonao tonga lafatra mandritra ny fotoana maharitra sy lava.
Fomba 4 hampiasa menaka esansiela ao an-tranonao
Manomboka amin'ny mpanadio tanjona rehetra ka hatrany amin'ny tsifotra tsotra hanampy antsika hampifanaraka ny gorodona. Lasa menaka lehibe ny menaka esansiela ...
Ahoana ny famoronan-akanjo mba hitsitsiana toerana
Fantaro ny fomba aforeto ny akanjo tsikelikely, mba ho voalamina tsara ao anaty lalimoara sy vatasarihana ny fitafianao rehetra.
Dingana 8 hananana fiainana maharitra
Raha te hanana fomba fiaina maharitra ianao dia afaka manomboka amin'ny fanovana ny fahazarana sasany toa izao manaraka izao.
Tetika 5 hitandrina ny trano ho madio sy milamina foana
Ireto torohevitra ireto dia hanampy anao hitazona ny tranonao hadio sy milamina hatrany, tsy mila mamono tena hanadio na hiezaka mafy.
Mpamboly Ikea: tadiavo ireo fomba rehetra!
Ireo mpamboly Ikea dia handravaka amin'ny fomba ao anatiny sy ivelan'ny tranonao. Famaranana samy hafa ary mitandrina tsara foana.
Mpandamina birao tsotra efatra hitandrina ny filaminana
Mpikarakara birao Ikea efatra mety ho ampy hitazomana ny latabatrao tsy misy korontana. Izahay dia mizara azy ireo aminao.
Ahoana ny fomba fanadiovana sy famonoana otrikaina ny vata fampangatsiahana amin'ny vokatra vita an-trano
Ny fanadiovana sy famonoana otrikaina ny vata fampangatsiahana dia tena mora amin'ireto vokatra vita an-trano ireto, ary koa mora hita sy manaja ny tontolo iainana.
Ny fanesorana tasy loko avy amin'ny gorodona dia mety ho sarotra arakaraka ny karazana loko sy gorodona. Andramo ireto torohevitra tsotra ireto.
Fanaka tsy misy tanana ao an-dakozia: Ny tombony lehibe
Ny fanaka tsy misy tanana ao an-dakozia dia manana tombony lehibe maromaro tokony ho fantatrao. Iray amin'ireo fironana lehibe io.
Fangatsiahana etona azo entina hanempotra ny tranonao
Ny cooler evaporative azo entina dia fitaovana iray hafa hampangatsiahana ny tranontsika rehefa fahavaratra. Jereo izy ireo!
Torohevitra hialana amin'ny fofona amin'ny akanjo
Te hianatra mamono fofona ratsy amin'ny akanjo ve ianao? Amin'ireto fanafody ao an-trano ireto dia azonao atao ny mamerina ireo akanjo tsy very fofona ratsy.
Ilaina ny fanadiovana ny fitaovana fanadiovana mba hisorohana ny bakteria sy ny zavamiaina bitika hafa hanimba ny fiarovana ny tranonao.
Te-hanampy loko ny latabatrao ve ianao? Ireo latabatra efatra izay zarainay aminao anio dia hanampy anao hahavita azy, hahita azy ireo!
Ahoana ny fanasana ny kiraronao sy hahatonga azy ireo ho tonga lafatra
Fantaro ny fomba fanasana ny kiraronao mba hahatonga azy ireo ho toy ny vaovao, miaraka amin'ireto fika tsotra ireto dia hanome marika kiraro vaovao isaky ny mandeha ianao.
Fetsy hanesorana tasy mavo amin'ny kidoro
Ny fanadiovana ireo tasy mavo avy amin'ny kidoro dia mora kokoa, mora kokoa ary ekolojika kokoa noho izay mety ho izy. Andramo ireto tetika namboarina ireto.
Lafiny 4 ao an-tranonao izay misy fiantraikany amin'ny toetranao
Ny fomba fahitantsika ny tranontsika dia misy akony lehibe amin'ny toetrantsika. Midira ao…
Fomba fanamboarana tavoahangy fitaratra
Amin'ireto hevitra ireto dia hianaranao ny fomba handravahana tavoahangy fitaratra ao an-trano, mba hahafahanao handravaka ny tranonao amin'ny zavatra miavaka sy manokana.
Jereo ny lakilen'ny fikandrana mihodina sy mihodina
Te hahafantatra ny tena mampiavaka ny varavarankely mitongilana sy mihodina ve ianao? Ny tombony sy ny fatiantoka? Izahay dia mizara azy ireo aminao.
Ahoana ny fomba fanadiovana ravina zavamaniry
Ilaina ny fanadiovana ny ravin'ny zavamaniry mba hahasalama azy ireo foana, feno tanjaka sy lavorary.
Ahoana ny fomba fandaminana talantalana na valizy
Te hahafantatra ny fomba handaminana talantalana na fitoeram-bokotra ve ianao? Aza adino ireo dingana tsotra ireo izay hanome fiainana vaovao ny fanakao.
Ny lakilen'ny fisafidianana ny lapoaly mety indrindra
Fantatrao ve ny lakilen'ny fisafidianana ny lapoaly mety indrindra? Androany dia zarainay aminao izy ireo mba tsy hampifangaro anao ny karazany marobe.
Torohevitra amin'ny fanadiovana ny trano alohan'ny fialantsasatra
Ny diovina alohan'ny fialantsasatra dia afaka mamonjy olana be dia be rehefa miverina ianao, miaraka amin'ireo torohevitra ireo dia ho mora kokoa.
Fetsy manadio vilany may
Amin'ireny tetika tsotra ireny dia azonao atao ny manadio vilany may amin'ny fomba mora, tsotra sy mahomby ary ny tsara indrindra, miaraka amin'ny vokatra ekolojika.
Fitaovana fototra handraisana saka ao an-trano
Handany saka ve ianao atsy ho atsy? Ireto ny kojakoja ilaina amin'ny saka izay ilainao hangonina alohan'ny hodiany.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny sivana misy ny rivotra
Ny fanadiovana ireo sivana misy ny rivotra dia ilaina mba hananan'ny fitaovana fitaovana mety sy fiainana lava ao an-tranonao.
Tetika 5 hanadiovana fitaratra varavarankely
Amin'ireny tetika an-trano tsotra ireny dia azonao atao ny manadio ny vera amin'ny varavarankely amin'ny fomba tsotra sy mahomby kokoa ary tsy mampiasa akora simika.
Ny lakozia Ikea izay tsy azonao adino ao an-dakozia
Hahita ampahany amin'ireo zavatra ilaina Ikea ao an-dakozia isika, miaraka amin'ity lakozia atolotray antsika ity: Takelaka, solomaso ary maro hafa.
Hevitra 4 tsy lafo mba ahazoana mitahiry ao amin'ny trano fidiovana
Te hanana tahiry ao an-trano fidiovana ve ianao? Ao Bezzia izahay dia mizara hevitra 4 tsotra sy mora vidy izay azonao ampiharina latsaky ny 40 €.
Fetsy an-trano hialana amin'ny bibikely ao an-trano
Raha te hisoroka ny areti-mifindra bibikely ao an-trano ianao dia azonao atao ny manandrana ireo tetika vita an-trano ireo, ekolojika, mora ampiharina ary tena mandaitra.
6 kojakoja fandroana "zero zero" ilaina
Te hampihena ny fidianao sy ny fako azo avy amin'izany ve ianao? Soloy ireo entana fako aotra izay atolotray anao anio.
Ahoana ny fomba fanamboarana freshener an-trano
Fantaro ny fomba fanaovana freshener amin'ny rivotra ao an-trano amin'ireto fomba fahandro tsotra sy mora atao ary voajanahary ireto izay mety tsara amin'ny fofona trano.
Te hankafy andiana famantaranandro fanairana am-boalohany ve ianao? Izahay dia manome anao ny maodely sasany izay tena notadiavinao.
Boaty sy harona 5 misy tahony handaminana ireo vokatra fanadiovana
Mila hevitra handaminana ny vokatra fanadiovanao ve ianao ary hamindra izany mora foana? Ireto boaty sy harona misy tanany ireto no vahaolana.
Ahoana ny fanamboarana ny gorodona amin'ny fanaka vita amin'ny hazo
Raha mila manamboatra ny fanaka vita amin'ny hazo ianao, na lesoka kely na gorodona kely aza, dia hahagaga anao ireo fikafika namboarina ireo.
Ahoana ny fomba fanesorana tasy voatabia
Amin'izany fikafika izany dia azonao atao ny manala ireo tasy voatabia amin'ny akanjo, eny fa na dia amin'ny akanjo marefo aza ary rehefa maina ilay tasy.
Robot any an-dakozia, iza no tokony hofidiko?
Te hiloka amin'ny robot an-dakozia ve ianao? Avy eo dia mila mahita ireo maodely amidy indrindra ianao, ny tombony azony ary maro hafa ny manapa-kevitra.
Tetika 5 hanamafisana ny fitehirizana ao an-dakozia kely
Sarotra ny lakozia kely. Ahoana ny fomba hananganana toerana ho an'ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ny toerana kely? Maximize…
Ahoana ny fomba fanadiovana ny kodiarana any ivelany
Amin'ireto toro-hevitra tsotra ireto dia azonao atao ny manadio antsy an-kalamanjana mora foana, izay hanitatra ny mahasoa azy eo amin'ny tokantranonao.
Lakilasy 5 hanavotana ny mari-pana amin'ny rivotra amin'ity fahavaratra ity
Te-hihary ea amin'ny AC ve ianao amin'ny fahavaratra? Manome anao lakile 5 izahay hanatanterahana izany ary handray anjara tsara amin'ny tontolo iainana sy ny paosinao
Ahoana ny fanesorana ra amin'ny akanjo
Ny fanesorana tasy ra amin'ny fitafiana dia tsy mora, fa tsy azo atao koa izany. Amin'ireny fikafika tsotra ireny dia avelanao ho toy ny vaovao ny fitafianao.
Safidy maharitra 4 hitondrana ny sakafonao
Mitady fomba hafa amin'ny aluminium foil na fonosana plastika? Mitadiava fomba hafa maharitra efatra hitondrana ny sakafonao sy ny sakafonao.
Torohevitra sy tetika fanasana ambainy ao an-trano
Amin'ireto torohevitra ireto amin'ny fanasana lambam-baravarana dia azonao atao ny mitazona ny ambainy rehetra ao an-tranonao amin'ny toe-javatra tonga lafatra sy haingana.
Tetika 5 hanalana tasy mafy loha amin'ny akanjo
Ireo fika hanalana tasy sarotra dia hahagaga anao, tsy mampiasa afa-tsy vokatra voajanahary izay matetika misy ao an-trano.
Air fryer, mpivarotra vaovao tsara indrindra ao an-dakozia
Ny fryer fryer dia nanjary tsy maintsy tamin'ny taona 2020. Fa inona no atao hoe air fryer? Ahoana ny fomba fiasa? Lazainay anao ny zava-drehetra.
Torohevitra hisorohana samoina ao anaty lalimoara
Ny samoina mihanaka ao anaty lalimoara, manimba ny akanjo voatahiry ao. Azonao atao ny misoroka azy mora foana amin'ny fanarahana ireo torohevitra ireo.
Làlan-tsotra tany an-trano hitsena anao
Te handray anjara ve ianao ho an'ireo mpandray voalohany ny tranonao? Ka izao dia fotoana mety hiaina fiainana vaovao amin'ireo hevitra ireo.
Fitaovana 5 ao an-trano Zara hitehirizana ny sakafo
Zara Home dia ao anaty fampirimana an-dakozia vaovao mba hitehirizana ny sakafo ho tsara tarehy toa an'ireo 5 asehonay anao.
Vinaigitra fotsy 6 ampiasaina amin'ny fanadiovana ao an-trano
Ny vinaingitra manadio fotsy dia famindra otrikaretina voajanahary ary mpiray dina matanjaka amin'ny fanadiovana ao an-trano. Ireo no fampiasana sasany amin'izany.
Fomba fanadiovana tsikelikely ny milina fanasan-damba
Ny fanadiovana ny milina fanasan-damba amin'ireto dingana tsotra ireto dia hanampy anao hitazona ny fahadiovan'ny fitaovana, hankasitraka izany ny fitafianao.
Fomba Konmari: ny fomba voafaritra handaminana ny tranonao
Ilay manam-pahaizana japoney, Marie Kondo, nanamboatra trano tamin'ny fomba Konmari taona lasa izay. Fantatrao ve izay misy azy?
Fetsy fanadiovana an-trano sy an-trano ho an'ny trano
Amin'ireny tetika fanadiovana trano ireny dia azonao atao ny mitazona ny tranonao ho madio, tsy misy otrikaina ary tonga lafatra mba hankafizanao ny fotoananao ao an-trano.
Ventilation mekanika voafehy, rafitra mahomby sy mahasalama
Ny Ventilation mekanika voafehy dia rafitra rivotra mahomby izay manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny rivotra. Mahalalà azy!
Fahadisoana ataonao rehefa manadio ny trano ao anaty metaly ianao
Isaky ny trano, ny fanadiovana dia atao amin'ny fomba hafa tanteraka sy miaraka amina andian-vokatra manokana ho an'ny ...
Stair Handrail: Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Jereo izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny lalotra tohatra: ny fitaovan'izy ireo, ny vidiny ary izay nomen'izy ireo haingo.
Mampianatra anao izahay anio ao Bezzia fomba na masontsivana samihafa handaminana ny fanangonana ny bokinao. Tadiavo ny azo ampiharina indrindra ho anao.
Ny maha-zava-dehibe ny fampidirana rivotra tsara ao an-trano
Ny fananana rivotra tsara ao an-trano dia fanalahidy hahatongavana ho tokantrano salama. Mahazo rivotra ve ianao matetika ...
Hevitra hampiasa indray ny siny fitaratra
Manome anao hevitra famoronana vitsivitsy izahay hampiasa indray ny siny fitaratra amin'ny alàlan'ny fanodinana azy ireo sy amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny fomba samihafa.
Raha te hahalala ny torohevitra tsara indrindra hanadiovana ny tranonao ianao dia tadidio hatrany ny fomba 20/10 ary raha tsy fantatrao ...
Karazana solomaso 5 hamenoana ny latabatrao
Betsaka ny karazana solomaso eny an-tsena arakaraka ny fombany. Mandinika azy ireo izahay amin'ny alàlan'ny katalaogin'i Zara Home.
Mihetsika ianao? Torohevitra 10 hanamaivanana ny fivezivezenao
Raha nanapa-kevitra ny hifindra sy hanorina trano vaovao ianao, dia azo antoka fa handroso lavitra ianao….
Famerenana amin'ny laoniny ny zavatra voajanahary: Nahoana izy io no tena zava-dehibe?
Fantatrao ve ny maha-zava-dehibe ny famerenana amin'ny laoniny ny zavatra biolojika? Hainao ny manao azy? Inona no fampiasana azy? Lazainay anao ny zava-drehetra.
Tombony sy fatiantoka amin'ny gorodona hazo
Ny fisafidianana ny gorodon'ny trano dia zava-dehibe indrindra, satria ny safidintsika dia ho zava-dehibe amin'ny asa ...
Latabatra kafe azo ovaina
Fantatrao ve fa ny fisian'ny latabatra kafe azo alaina dia mitovy amin'ny tombony lehibe? Hilaza aminao izahay rehetra mba handresy lahatra anao.
Torohevitra 5 amin'ny fitehirizana akanjo tsy vanim-potoana
Ny fitahirizanao tsara ny fitafianao amin'ny vanim-potoana dia hanampy anao hankafy azy ireo lava. Soraty ireo torohevitra ireo.
Fahadisoana 7 ataonao rehefa mihodina
Tena ilaina ny famerenana amin'ny laoniny, miha mailo hatrany isika rehefa miresaka momba ny fanodinana ny fako vokarintsika rehetra ...
Toy izao no tokony hamonoana ireo fitaovana hazo ao an-dakozanao
Raha manana fitaovana vita amin'ny hazo ianao ary tsy azonao antoka ny fomba hamonoana azy ireo, dia holazainay aminao ny fomba hanadiovanao azy ireo ...
Zaridaina kely: Ahoana ny fomba handravahana azy ireo?
Te hanana hevitra handravahana zaridaina kely ve ianao? Avy eo amin'ny fanarahana andian-dingana tsotra dia hahatratra izany ianao. Jereo izy ireo!
Entana 5 izay manana iray monja
Misy kojakoja ao an-trano izay tsy mila singa mihoatra ny iray ianao. Ireto misy ohatra vitsivitsy nalaina avy amin'ny horonan-tsary minimalist.
Fahasamihafana eo amin'ny fanasana milina sy ny fanadiovana maina
Betsaka ny olona tsy mahalala ny tena maha samy hafa ny fanadiovana maina sy ny fanasana milina, hita taratra izany ao ...
Manadihady ny Zero Waste, magazay an-tserasera ho fiainana maharitra izahay
Miresaka amin'ny mpanorina ny Residuo Cero izahay, fivarotana an-tserasera malaza amin'ny fivarotana vokatra ho an'ny fiainana tsy misy fako sy maharitra.
Raha tianao i Bonsai dia mianara mikarakara azy ireo mba haharitra kokoa
Mampanan-karena antsika ny zavamaniry, tonga lafatra izy ireo handravaka ny tranonay ary misy karazany maro dia maro izay ho hitanao fa ...
Jacuzzi inflatable: fantatrao ve ny tombony lehibe azo avy amin'izany
Fantatrao ve ny tombony lehibe ateraky ny jacuzzi inflatable? Androany dia hampahafantarinay ireo zava-dehibe indrindra amin'ny fahasalamanao sy ny hoditrao izay tokony ho fantatrao.
Mpanamboatra kafe mitete tanana dia safidy tsotra sy mora vidy amin'ny fanaovana kafe. Jereo ny telo amin'izy ireo miaraka aminay!
Raha te-hikasika ny efitranonao ianao fa tsy hainao ny manao azy amin'ny fomba tsotra ka ...
Andao hojerentsika hoe inona ny tombotsoan'ny eco an'ny trano bitika ary ny fomba anampiany antsika hitahiry sy hikarakara ny tontolo iainana.
Hevitra 7 handokoana ny vilaninao ao an-trano
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny toetrandro sy lohataona tsara, maro ny olona tia ny tranony hiseho miloko kokoa, ...
Mba hisorohana ny fofona ratsy ao an-trano dia tsy maintsy fantarintsika ireo singa mahatonga azy ireo. Ary ny momba azy ireo manokana dia miresaka anio any Bezzia izahay.
Zavatra 10 tsy tokony hikosohanao azy
Rehefa manasa isika dia sarotra be ny manakana ny zavatra tsy hianjera ao anaty tatatra, rehefa manadio lovia sy ...
Fahadisoana 5 hialana rehefa handravaka ny lakozia
Raha tia mahandro sy mandany fotoana be ao an-dakozia ianao dia azo antoka fa nanontany tena ianao hoe iza no mety indrindra ...
Sakafo legioma ho an'ny alika, eny sa tsia?
Mety amin'ny alika ve ny sakafo tsy mihinan-kena? Toa mazava kokoa ny ananan'ny manam-pahaizana. Androany izahay dia milaza aminao amin'ny antsipiriany!
Lahatsoratra 5 izay hanampy anao handamina ny lalimoanao rongony
Mikasa ny hametraka filaminana ao anaty lalimoanao rongony? Ireo lahatsoratra arosonay anio dia ho azo ampiharina indrindra ho anao.
Tokony ho fanadiovana ny tranonao izany
Rehefa miomana amin'ny fanadiovana ny tranontsika amin'ny fomba feno sy mahomby kokoa isika dia mety hifankahita ...
Mitombo amin'ny lavarangana misy anao, mamorona zaridaina an-tanàn-dehibe
Manome toro lalana vitsivitsy anao izahay hitombo eo amin'ny lavaranganao sy hahitana ny fomba hanararaotana an'io faritra ao an-trano io.
Ianaro ny fomba fanesorana tasy henjana amin'ny karipetra
Raha manana karipetra ao an-trano ianao dia hahaliana anao ity lahatsoratra ity, ary indrindra raha tsy maintsy nanadio ...
Ambain-dakozia, misafidy izay tsara indrindra ho an'ny tranonao!
Te hisafidy ny ambain-dakozanao ve ianao? Aza hadino ireo torohevitra kely ireo izay tena ilaina indrindra amin'izany.
Handravaka ny lakoziananao amin'ny zavamaniry manitra
Iza no tsy te hanana zaridainan'ny lakozian'izy ireo feno zavamaniry manitra? Ireo zavamaniry manitra dia ...
Ampianarinay ianao handoko ny fanaka vita amin'ny hazo mba ho tonga lafatra izy ireo
Azo antoka fa manana fanaka taloha ao an-trano ianao dia te hanome azy fotoana faharoa raha mbola mandoko azy ianao ary ...
Jiro jiro: nentim-paharazana sa maoderina?
Tianao ve ny jiro nentim-paharazana na angamba maoderina kokoa? Androany dia miresaka momba ny tombony sy fatiantoka tokony horaisina isika.
Lakile 4 handaminana ny lalimoanao rongony
Ny fananana lalimoara ho an'ny akanjo fotsy dia fahita tany an-tranonay taloha. Androany, na izany aza, vitsy ny ...
Miresaka telecommute ve ianao? Handravaka ny biraonao amin'ny fomba
Raha noterena telecommute tamin'ity taona lasa ity ianao dia holazainay aminao ny fomba ahafahanao mandamina ny efitranonao hahazoana birao misy fomba
Manome anao hevitra vitsivitsy izahay hamolavolana sy hamoronana zaridaina ekolojika tsara tarehy ao an-trano izay manaja ny natiora.
Tazomy amin'ny tranonao ireto torohevitra 10 ireto, tsy manahirana!
Raha tsy hainao ny mitazona ny tranonao dia holazainay aminao ny hetsika 10 izay azonao atao indraindray mba hitazomana azy amin'ny toerana lavorary.
Lafaoro lafaoro hamita ny lakoziao
Fantatrao lafaoro latabatra? Avelanay anao anio izay rehetra tena ilainao ho fantatra: Aiza no hametrahana azy ireo, tombony ary maro hafa.
Rafitra fanamafisam-peo samihafa mba hampangatsiahana ny tranonao
Tsy dia lavitra ny maripana ambony. Te hahafantatra ireo rafitra fanamoriana hafanana samihafa ve ianao mba hampangatsiaka ny tranonao amin'ity fahavaratra ity?
Ireo no lesoka mahazatra indrindra rehefa mandoko ny tranonao
Raha nanapa-kevitra ny handoko ny rindrin'ny tranonao ianao dia tokony hamaky tsara ireo torohevitra tsara indrindra mba ...
Fantaro ny tombony sy ny fatiantoka ny fanafanana mamirapiratra
Ny fanafanana taratra dia iray amin'ireo rafitra fanamafisam-peo mahomby indrindra. Jereo ny tombony rehetra sy ny fatiantoka an'io.
Ampiharo ao an-tranonao ny fomba Feng Shui
Azo antoka fa efa naheno momba Feng Shui ianao, saingy mety tsy fantatrao mazava hoe inona no tafiditra amin'ity fomba ity sy ny fomba ahafahanao ...
Vata fampangatsiahana Smeg: kalitao sy maha-izy azy
Fantatrao ny vata fampangatsiahana Smeg? Manana endrika, hevitra ary loko maro izy ireo izay hahagaga anao sy ny lakozianareo.
Fitaovana 5 ao an-trano Zara ho an'ireo tia mofomamy
Te-hanomana mofomamy sy mofomamy ao an-trano ve ianao? Amin'ireto fitaovan'ny Zara Home ho an'ny mpitia mofomamy ireto dia ho mora kokoa izany.
Ianaro ny fomba hanazavana ny tranonao amin'ny fahalavorariana, hahitanao ireo toro-hevitra omenay
Amin'ity lahatsoratra ity dia tianay ny hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny hazavana ao an-tranontsika, hanazava ny trano amin'ny lalana ...
Ahoana ny fanadiovana an-trano maitso
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao manadio ekolojika bebe kokoa ao an-trano amin'ireo vokatra tsotra ireo.
Asio hazo ao an-tranonao, ny fikasanao ilainao
Ho an'ny anio dia tianay holazaina aminao ny vokatry ny hazo omena anay ao an-tranonay, inona avy ireo hatsaram-panahy ananany ...
Torohevitra momba ny fisafidianana taila ao an-dakozia
Mitady torohevitra momba ny fisafidianana taila an-dakozia? Androany izahay manome anao ny dingana tsara indrindra amin'ny lafiny lamba, vita ary maro hafa.
Ahoana ny fomba fanadiovana haingana ny fandroanao amin'ny vinaingitra sy ny saosy fanaovana mofo
Te hahafantatra ny fomba fanadiovana ny fandroana amin'ny vokatra tsotra ve ianao ary haingana? Androany dia mizara hafetsena aminareo izahay.
Tombony sy fatiantoka amin'ny fandokoana mainty rindrina
Mampidi-doza ve ny mandoko mainty ny rindrina ao an-tranonao? Ny mainty no mety ho fikitika indrindra ...
Torohevitra fitehirizana amin'ny faktioran'ny herinaratra
Te hihary amin'ny faktioran-jiro ve ianao? Ao Bezzia izahay dia mizara torohevitra vitsivitsy hanampy anao hampiasa hazavana amin'ny fomba mahomby.
Alamino miaraka amin'ireto torohevitra ireto ny tranonao, miasa izy ireo!
Raha mikasa ny handamina ny tranonao amin'ny fomba faran'izay mahazo aina indrindra ianao, dia raiso ny torohevitray hisorohana ny ...
Fahazarana 4 ao amin'ny trano fandroana izay tsy maintsy raisintsika na horoahintsika
Misy fahazarana ao amin'ny trano fandroana izay tsy maintsy ampidirintsika na horoahina amin'ny fanaontsika mahazatra. Androany dia mifantoka amin'ny efatra amin'izy ireo izahay, hahita azy ireo!
Hevitra hahatonga ny tranonao handray tsara kokoa
Raha mitady hanome toky hafa ny tranonao ianao dia raiso ny torohevitray, tianay ho tonga ny tranonao ...
Hevitra mialoha 5 hisafidianana ny am-patana tsara indrindra
Inona no fatana fandoroana tsara indrindra ho an'ny tranoko? Amin'ireo volana mangatsiaka izay andaniantsika fotoana bebe kokoa amin'ny ...
Ny lakilen'ny fanatsarana ny naoty angovo ao an-trano
Ny isa amin'ny angovo an-trano dia mampiseho ny fahombiazan'ny angovo tsara na ratsy amin'ny tranobe iray, manome fampahalalana mahasoa ...
Kaontenera tery 4 hahazoana toerana fitahirizana ao amin'ny trano fidiovana
Mila mahazo toerana fitahirizana ao amin'ny trano fidianao ve ianao? Heverinay fa azo ampiasaina ho anao ireo fanaka efatra tery ireto.
Fanalahidy hananana lakozia mety tsara
Te hankafy lakozia mety tsara ao an-tranonao ve ianao? Avy eo dia mila mahita ny toro-hevitra omena anao anio fotsiny ianao.
Toerana 5 hahitana ny microwave ao an-dakozia
Fitaovana ilaina ao an-dakozia ny microwave. Isika izay nampiasa azy io fotsiny no nanafana ny sakafo taona vitsivitsy lasa izay, ...
Tafontrano maitso, vahaolana maharitra misy tombony maro
Ny tafo maintso dia afaka manampy antsika hanatsara ny tontolo maloto amin'ireo tanàna. Te hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo ve ianao?
Fomba hisafidianana ny lambam-pandroana mety
Fantatrao ve ireo lafin-javatra tokony horaisina mba hisafidianana ny lambam-pandroana mety indrindra amin'ny fandroana anao? Ny fitaovana sy ny endriny no lakilena.
Ahoana ny fomba hamoronana tontolo ara-pahasalamana sy voajanahary ao an-trano
Manome toro lalana vitsivitsy anao izahay hamoronana tontolo ara-pahasalamana sy voajanahary ao an-trano miaraka amin'ny torohevitra vitsivitsy.
Araraoty tsara ny mety rehetra ananan'ny lakoziananao
Te hahazo tombony betsaka amin'ny lakozia ve ianao? Aza hadinoina ireo dingana na torohevitra rehetra ireo mba hahitana azy toa malalaka kokoa noho izy.
Miloka amin'ny lakozia antitra
Te hankafy lakozia fanao antitra ve ianao? Jereo avy eo ny antony mety ho iray amin'ireo hevitra tsara indrindra tokony hotanananao.
Fetsy manadio volafotsy ao an-trano, makà!
Volafotsy rehefa mandeha ny fotoana ary very ny famirapiratany. Te hahafantatra ny fomba hamerenana azy io ve ianao? Soraty ireto torohevitra ireto amin'ny fanadiovana volafotsy sy fitehirizana azy.
Kilalao eco-friendly ho an'ny biby fiompy
Manome anao hevitra vitsivitsy izahay hampiasa kilalao ekolojika ho an'ny alika, fomba iray hafa hiarovana ny tontolo iainana.
Fatana Pellet, rafitra fanamainana madio
Ny fatana pellet dia revolisiona teo amin'ny rafitra fanamafisam-peo, saingy ahoana no fomba fiasan'izy ireo ary inona no tombony azony?
Karazana harona 4 handaminana voankazo
Mitady hevitra handaminana voankazo ao an-dakozia? Raha izany dia tandremo ireo karazana sobika mihantona efatra izay zarainay aminao anio.
Fanomezana eco ho an'ity Noely ity
Manome anao hevitra momba ny fanomezana eco vitsivitsy izahay mandritra ny Noely.
Ahoana ny fanadiovana ny fanasana vilia mba hikolokoloana tsara
Hainao ve ny manadio tsara ny mpanasa vilia mba haharitra sy ho tsara kokoa? Mampianatra anao ny tetika rehetra izahay.
Ny lakilen'ny Krismasy maharitra kokoa
Azo atao ve ny mankafy Krismasy amin'ny fomba maharitra? Misy fomba iray hafa hankalazana ity vanim-potoana ity ary afaka ...
Karazana heaters elektrika amin'ny efitrano fanafanana
Ny heaters elektrika azo entina dia vahaolana tsara amin'ny efi-trano fanafanana amin'ny ririnina. Fantatrao ve ny karazany?
Volam-by LED, safidio izay mety
Hanova ny jiro ao an-tranonao ve ianao? Atorinay aminao ny lakilen'ny fisafidianana takamoa LED mety indrindra ao amin'ny Bezzia. Jereo izy ireo!
Ny fanontaniana miverimberina matetika momba ny biby
Te hahafantatra ireo fanontaniana mahazatra momba ny biby fiompy ve ianao? Avy eo avelao ny tenanay ho entin'ireo izay lazainay eto.
Hevitra 4 handaminana tabilao fanapahana
Tianao ve ny hitazona ny lakozia ho madio sy milamina? Manolotra hevitra samihafa izahay handaminana takelaka fanapahana eo amin'ny latabatra na ny arimoara.
Fandriana biby fiompy
Ahoana ny fomba hanampiana fandriana biby fiompy ao an-tranonao, antsipiriany momba ny tontolo iainana.
Harona voajanahary fibre 5 izay tena ho azo ampiharina
Ny harona vita amin'ny fibre voajanahary dia safidy tsara handravahana sy hitazomana ny trano hilamina. Manolotra dimy izahay miaraka amina endrika hafa.
Automation an-trano, fitaovana hitsitsiana angovo
Ny fanodinana trano dia ahafahantsika mampihena ny fanjifana angovo, ankoatry ny fampitomboana ny fampiononana sy ny fiarovana ny trano. Ahoana?
Famantarana fa tia anao ny alikanao!
Mahamarika famantarana ny biby fiompinao ve ianao? Eny, efa nilaza taminay izahay fa ny alikanao dia tia anao be dia be, mampiseho azy aminao amin'ny fihetsika tsirairay izay tononinay.
Torohevitra fanasana lamba sy ondana
Mety nanontany tena ianao hoe impiry ianao no manasa lamba firakotra, toy ny lambam-pandriana, ondana na fonony ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny sakafo ho an'ny alikanao?
Ankehitriny ianao dia afaka misafidy ny fahana ho an'ny alikanao amin'ny fomba azo antoka kokoa. Torohevitra mba hanomezana ny tsara indrindra hatrany ho an'izay anisan'ny fianakavianao
Mamorona rakitrao manokana handaminana antontan-taratasy
Ny volana ririnina no mety handaminana ny taratasintsika. Mandany fotoana bebe kokoa any an-trano izahay ary ...
Leroy Merlin lakozia matevina
Manana efitrano kely ao an-dakozia ianao fa mila fanovana? Aza hadino ny lakozia kely, ny ankehitriny sy ny loko izay asehonay anao
Ny lakilen'ny fitehirizana amin'ny fanafanana amin'ny ririnina
Miaraka amin'ny fihenan'ny maripana dia tsy azo ihodivirana ny vidin'ny fanafanana. Raha tsy izany dia hiala amin'ny fampiononana isika amin'ny ...
Tompon'ny horonan-dakozia 5 hanana taratasy eo am-pelatanana hatrany
Ny mpihazona horonan-taratasy dia manampy betsaka rehefa hiasa amin'ny fomba milamina kokoa ao an-dakozia sy hitazona ny filaminana ao anatiny. Asehonay aminao dimy.
Ny lakilen'ny fandokoana lamba misy voankazo, legioma ary zavamaniry
Ny fampiasana zavamaniry dia fomba maharitra sy tsy misy poizina handokoana lamba. Mahafinaritra koa! Maninona no manomana fitsangatsangana mamakivaky ny ...
Karazan-dakozia arakaraka ny fizarana azy ireo
Te hahafantatra ireo karazana lakozia tsara indrindra ve ianao arakaraka ny fizarana azy ireo? Ka aza adino ny zavatra rehetra anananay ho anao anio.
Borosy 6 mety ho ilaina ao an-tranonao
Ao amin'ny Casa González & González dia afaka mahita borosy nentim-paharazana tahaka ireo izay arosonay anio ho an'ny tranonao amin'ny fampiasana samihafa.
Fanalahidy sasany hisorohana ny fako ao an-trano
Izahay dia mizara aminareo tetika vitsivitsy hisorohana ny fako ao an-tranonay. Eo am-pelatanantsika!
Kitapom-bokatra, plastika sa hazo?
Iza amin'ireo takelaka fanapahana no azo antoka, ny plastika sa ilay hazo? Misokatra ny adihevitra ary ao Bezzia no hamaliantsika ny fanontaniana.
Feo amin'ny guinea pig sy ny dikany
Raha manana kisoa guinea any an-trano ianao dia mety te hahalala ny dikan'ny feo rehetra atolotray azy ireo dia holazainay aminao!
Ny zavatra tokony ho fantatrao alohan'ny fanananao ny kisoa ho biby fiompy
Raha manana guinea pig ianao na raha te hanana izany dia ilaina ny fahafantaranao ireo fampahalalana rehetra ireo mba hahafahanao miaina am-pifaliana eo anilanao.
Ahoana no hikarakaranao ny fanaka sahaanao sy hiarovana azy amin'ny ririnina
Ny fiarovana sy ny fitehirizana tsara ny fanaka an-jaridainanao dia fanalahidy hankafizanao azy indray amin'ny lohataona. Jereo hoe ahoana no hanaovana azy!
Ny lakilen'ny fananana lakozia mahomby kokoa
Misy fepetra tsotra vitsivitsy izay afaka manampy antsika hanana lakozia mahomby kokoa. Hetsika tsotra izay ankoatry ny fandraisana anjara amin'ny ...
Asa fanaovana zaridaina hatao amin'ny fararano
Misy ny asa fanamboaran-tany izay asaina hatao amin'ny fararano mba hanomanana ny zaridaina amin'ny ririnina. Te hahafantatra an'iza ianao?
Fiheverana sy fiheverana inona no ilain'ny saka?
Raha te hanana saka toy ny biby ianao dia mila fantarinao ny karazana fiheverana tokony homenao azy.
Lakilen'ny fikarakarana saka
Ny fananana saka dia mety hidika zavatra samihafa amin'ny olona samy hafa. Ny sasany te saka hifamihina sy hipetraka ...
Toerana 4 hametrahana latabatra kely ao an-trano
Tsy mora foana ny mahita toerana hametrahana latabatra kely ao an-trano. Nihevitra an'ireo toerana 4 ireo ve ianao?
Ny lakilasy handravahana ny tranonao amin'ny fomba maharitra
Any Bezzia izahay dia manohy mizara aminareo ny lakilen'ny fiainana maharitra kokoa. Androany isika dia miresaka momba ny haingon-trano maharitra, inona no ahitana azy?
Fahalianana lehibe amin'ny alika Dalmatian
Te hahafantatra ireo fieritreretan'ny alika Dalmatian ve ianao? Androany dia holazainay aminao ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra tokony ho fantatrao.
Lemaka kiraro 5 izay tianay
Androany dia te-hizara aminareo mpanamboatra kiraro dimy tianay izahay. Saingy tsy tia azy ireo fotsiny isika; mino koa izahay fa mety ho ...
Efitrano zaza tia namana
Lazainay aminao ny fomba azo atao hahazoana efitrano zaza tia namana ho an'ny tranonao.
Zavatra 5 tsy fantatrao fa TSY tokony apetrakao ao amin'ny fanasana vilia
Raha matetika no apetrakao ao amin'ny fanasana lovia ny zavatra rehetra, ajanony! Misy kojakoja an-dakozia izay avela tsy voakitika.
Torohevitra 5 hanomanana ny tranonao amin'ny ririnina
Ny fanomanana ny tranonao amin'ny ririnina no zava-dehibe raha te hisoroka ny olana na ny vidiny fanampiny ianao rehefa tonga ny hatsiaka. Manampy anao amin'ny toro-hevitra 5 izahay.
Bronchitis amin'ny saka: inona izany ary ahoana no hitondrana azy
Jereo ny fampahalalana tena lehibe momba ny bronchitis amin'ny saka, inona izany ary inona ny fitsaboana azy?
Madio ve ny saka?
Avy eo izahay dia hanazava ny fomba hahafantarana raha purebred ny saka anao ary inona no zava-dehibe indrindra tokony ho fantatrao.
Fa maninona no misy ra ao amin'ny ranon-tsakay
Raha tsikaritranao fa misy rà ny saka anao, dia mila fantatrao haingana araka izany.
Saka sy trano fidiovana
Efa nieritreritra ny handro ny saka ve ianao? Aza hadinoina daholo ireo fampahalalana rehetra ireo hisorohana azy tsy hitebiteby.
Dakozia volondavenona, atambaro amin'ny fomba tsara indrindra
Tianao ve lakozia feno volondavenona? Avy eo dia ho tianao ireo fitambarana rehetra ireo hamoronana fomba tsara ao an-dakozia. Sahinao ve izany?
Torohevitra 5 hanamafisana ny toerana ao an-dakozia kely
Tsy mora ny manao lakozia misy refy kely kokoa noho ny an'ny arimoara tsara….
Ahoana ny fomba handaminana barbecue tsara ao an-trano
Raha te hanao fety fanaovana barbecue ao an-trano ianao ary mankafy fatratra ny vahininao rehetra dia aza hadinoina ireo torohevitra ireo hahazoana izany.
Fitaovana 4 hitehirizana herinaratra ao an-trano
Misy fitaovana kely hitsitsiana herinaratra izay afaka manampy antsika hifehezana ny fanjifana angovo sy hampihena ny faktioranay.
Zavatra ampianarin'ny biby fiompinao
Raha mijery akaiky ianao, dia mety ho mpampianatra fiainana lehibe ny biby fiompinao. Lazainay aminao ny zavatra manan-danja izay azon'izy ireo ampianarina anao.
Lakozia amin'ny loko mainty, fironana miakatra
Tia lakozia miloko mainty ve ianao? Ireto misy tombony sasany sy ireo fitambarana tsara indrindra avelany antsika. Miloka amin'izy ireo!
Zatra manadio lakozia ao anatin'ny 15 minitra
Ity fahazarana manadio lakozia mandritra ny 15 minitra ity dia hahafahanao mitazona ny lakoziananao mandritra ny herinandro tsy misy ezaka be loatra.
Sakafo mampidi-doza 7 ho an'ny alika
Tsy tokony omena sakafo alika na inona na inona! Misy sakafo mety hahatonga anao hahatsapa ho ratsy tarehy ary hahafaty anao mihitsy aza.
Sakafo mampidi-doza 8 ho an'ny saka
Fantatry ny tompona saka rehetra fa afaka manana lanja tsara tarehy izy ireo rehefa notezaina tao amin'ny fianakavian'olona ... Na dia ...
Hevitra handaminana ny efi-tranon'ny kifafa
Ny efi-tranon'ny kifafa dia mahazatra ao an-tranontsika. Ampiasainay hitahirizana izany, ankoatry ny kifafa, siny, fitoeran-tsakafo, fitoeran-tany ...
Cotoneaster dammeri, kirihitrala mety tsara ho an'ny zaridaina
Te-hametraka roimemy mihosinkazo ao amin'ny zaridainanao ve ianao izay mameno ny habaka feno loko mahafinaritra? Jereo ny Cotoneaster dammeri, dia hahagaga anao izany !!
Ny fiteny miafina an'ny biby fiompy
Raha manana biby fiompy ianao, dia azo antoka fa te hahalala ny fiteniny miafina ianao ... raha mijery akaiky ianao dia ho afaka hahafantatra zavatra izay lazainy aminao nefa tsy misy teny.
Omano ny alikao amin'ny fikolokoloana tsara
Tsy mila mitondra ny alikanao any amin'ny salon canine foana ianao satria vola ny vidiny, azonao atao ny manamboatra azy avy any an-trano! Ho tsara be ilay izy!
Torohevitra tsara indrindra hanamboarana endrika ny lakozia tadiavinao
Aza adino ireo dingana ireo, amin'ny endrika torohevitra, hahafahanao mamorona indray ny lakozia izay notadiavinao hatrizay. Avelantsika hazava tsara daholo izany.
Fomba efatra hamoronana zaridaina manitra ao an-dakozia
Mila hevitra hamoronana zaridaina manitra ao an-dakozia ve ianao? Ao amin'ny Bezzia izahay dia mampiseho hevitra efatra samy hafa hanatanterahana izany.
Torohevitra hampiasa saka very
Raha te hanana saka mirenireny ianao dia tsy maintsy manaraka ireto torohevitra ireto raha te hanao tsara ary salama tsara ianao sy ny saka.
Mandraisa anjara amin'ny mahasoa ny biby nefa tsy mandany vola
Raha te hikarakara biby ianao nefa tsy mandany vola dia azo atao izany ... Araho ireto torohevitra ireto dia handray anjara amin'ny fiadanany ianao.
Hevitra handaminana ny fitaovanao amin'ny zaridaina
Tombontsoa iray ny fananana zaridaina nefa misy asa koa ao. Ny fananana toerana handaminana ny fitaovanao ao an-jaridaina dia lakilen'ny fampandehanana ny zava-drehetra.
Manana izany eritreritra izany ny saka anao isan'andro
Raha manana saka ao an-trano ianao ary ao anatin'ny fianakavianao izany, dia tokony ho fantatrao fa mandinika ny lohan'ny saka isan'andro ireo eritreritra ireo ...
Trano pasifika sy trano ekolojika, inona no mampiavaka azy ireo?
Trano passive sy trano maintso no ho avy. Te hahafantatra ny toetran'ny tsirairay sy ny nuances manavaka azy ireo ve ianao?
Ireo biby fiompy tsy fahita firy azonao ananana
Raha te hanana biby fiompy ianao fa tsy "normal" dia aza adino ity lisitr'ireo biby fiompy tsy fahita firy ity. Ianao dia maniry azy rehetra!
Lakozia modely ikea izay mifanaraka amin'ny habakao
Hanamboatra ny lakozia ve ianao? Avy eo tsy azonao atao ny tsy mahita ny hevitr'i Ikea amin'ny endrika lakozia modular. Azo antoka fa hitia azy ireo ianao!
Torohevitra hanadiovana tsara ny barbecue arina
Barbecue dia miangona manodidina anao namana sy fianakaviana ao anaty zaridaina sy terraces. Ao Bezzia izahay dia mizara torohevitra momba ny fanadiovana barbecue arina.
Fitsaboana akondro vita amin'ny voaroy an-trano ho an'ny alika
Na dia maro aza ny voankazo tsy tsara ho an'ny alika, ny frezy sy ny akondro dia mahomby amin'ny ...
Bacon Cheddar Muttfins ho an'ny alika
Aza adino ity fomba fahandro Bacon Cheddar muttfins matsiro ho an'ny alika ity! Ho faly ny biby fiompinao.
Ny tombony lehibe an-dakozia fotsy
Fantatrao ve ny tombony azo avy amin'ny lakozia fotsy? Eto izahay dia mamela anao amin'ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra ary tianao ho fantatra. Miloka amin'izy ireo!
Kojakoja fandroana 4 izay hanova ny fandroanao
Ireo kojakoja fandroana fandroana ireo dia hahatonga ny fandroanao ho miala sasatra kokoa noho ny taloha. Ary tsy izany ve no tanjona?
Alika marani-tsaina 4
Raha mieritreritra ny hanana alika ianao ary hanitatra ny fianakavianao interspecies, dia azo inoana fa ...
Anaran-tena 10 ho an'ny alika
Aza adino ireo anarana 10 tany am-boalohany ho an'ny alika ireo! Raha manana mpikambana canine vaovao ao amin'ny fianakavianao ianao dia safidio ny iray amin'ireto anarana ireto!
Ny hevitra azo ampiharina indrindra amin'ny lakozia milamina
Te hanana lakozia milamina ve ianao? Ka aza adino ny hevitra azo ampiharina sy tsotra toa izay asehonay anao eto.
Vahaolana fanadiovana an-trano 4 izay mandeha
Ao amin'ny Bezzia dia mizara vahaolana fanadiovana 4 izahay anio hanalana ny loto amin'ny lohan'ny fandroana sy ny milina fanasan-damba, ny fofona avy amin'ny karipetra ...
Hevitra handany ny fahavaratra miaraka amin'ny biby fiompinao
Raha manana biby fiompy ianao, ny fahavaratra koa dia fotoana mety hiarahana mankafy ... mamela hevitra vitsivitsy izahay hahatonga azy ireo hiavaka!
Tafontrano maitso sy rindrina velona
Lazainay aminao ny tombony azo amin'ny tafontrano maitso sy rindrina velona, ​​izay manandanja kokoa amin'ny tanàna.
Alika lehibe 6 dia tsy hanenenanao ny fanananao
Alika kely dia hita hatraiza hatraiza, fa ny lehibe kosa manaitra ny rehetra. Na izany aza, manana alika be ...
Ny tetika tsara indrindra hampianarana ny alikanao
Raha te hampianatra ny alika ny tetika tsara indrindra ianao, eto dia manana andian-dahatsoratra amin'izy ireo. Mahafinaritra sy tsotra mankafy anao sy ny biby fiompinao.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny siny fihinana
Safidy lehibe ny fampiasana ny siny tsy ampoizina handaminana ny pantryo. Te hahafantatra ny fomba fanadiovana azy ireo ve ianao ary hampiomana azy ireo amin'izany?
Maninona no mitondra fahasambarana ho anao ny biby
Manana biby fiompy ao an-trano ve ianao? Anisan'ny fianakavianao izy ireo ary hitondra fahasambarana betsaka aminao koa izy ireo saika tsy hitanao ...
Ny fanomezana an-tsitrapo ao amin'ny toeram-pialofana biby dia mahatonga anao ho olona tsara kokoa
Raha te-hitombo amin'ny maha-olona ianao ... mora toy ny milatsaka an-tsitrapo any amin'ny toeram-pialofana biby izany, dia hahatsapa ho tsara amin'ny tenanao ianao!
Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny fananana biby fiompy faly
Tena faly ve ny biby fiompinao? Azo antoka fa manao izany ianao, fa raha tsy mazava tsara ianao, dia tsy misy toa ny fanarahana toro-hevitra azo ampiharina maromaro.
Zavatra 3 ny bosoa amin'ny rindrina dia afaka manampy anao mandamina
Ny cork dia fitaovana tsy dia nohajaina tamin'ny lafiny maro na dia teo aza ny fahaizany misimisy ary ...
Midika inona ny fidradradradran'ny alika?
Te hahafantatra ny dikan'ny fidradradradran'ny alika ve ianao? Ireto ny valiny tsara indrindra amin'io fotoana io izay mamela antsika hisalasala foana.
Boky 4 izay hanampy anao handamina ny tranonao
Vao avy nahaleo tena ve ianao? Mihetsika ve ianao? Tsy azonao atao milamina ve ny tranonao? Ireo boky 4 ireo dia hanampy anao handamina ny tranonao sy ny fiainanao.
Lakilasy 5 hanananao trano milamina
Raha te hanana trano milamina ianao dia mila mifantoka amin'ny haingon-tranoo, fa amin'ny saina ihany koa. Manome anao ny lakilen'ny fanatanterahana izany izahay.
Torohevitra handro ny alika amin'ny fomba marina indrindra
Fantatrao ve hoe inona ireo dingana tokony harahina rehefa mandro ny alikao? Manolotra andiana toro-hevitra tsotra tokony hodinihinao izahay.
Fako fanariam-pako handaminana ny fako
Betsaka ny karazana fanariam-pako handaminana ny fako eto an-trano. Cubes misy hatsarana mahafinaritra, ary azo ampiharina koa.
Tombony azo amin'ny torimaso amin'ny alika
Manolotra anao andian-tombo azo avy amin'ny torimaso amin'ny alika. Azo antoka fa manomboka izao dia hiova tanteraka ny alin'ialahy.
Ireo mpanantona mety indrindra amin'ny fitafianao
Firifiry ny karazana fanantonana ao anaty efi-tranonao? Iray amin'ireo efa nahantona fanantonam-bokatra avy amin'ny toerana samihafa ve ianao? ...
Ny fiantraikan'ny fiovan'ny mari-pana amin'ny alika
Fantatrao ve ny fiatraikan'ny maripana eo amin'ny biby fiompintsika? Eto izahay dia mamela anao hanondro vitsivitsy hahafantarana azy ireo.
Lakile fanalahidy maoderina 5 ho an'ny efitranonao
Ny fananana mpihazona lakile ao amin'ny efitrano ahafahanao mamela ny lakilanao rehefa mody any an-trano dia toro-hevitra tsara mba tsy hahavery azy ireo na handany fotoana be dia be hitadiavana azy ireo.
Ahoana ny fomba hampialana voly ny biby fiompy amin'ny fotoanan'ny Coronavirus
Tsy mora foana ny mampiantrano ny biby fiompintsika amin'ny fotoanan'ny Coronavirus. Mandeha ny herinandro ary mihasarotra izany. Eto izahay mamela anao toro-hevitra vitsivitsy!
Tandindomin-doza izao ny Catharanthus roseus saingy noho ny fahaizany mampifanaraka dia nahavita nijanona ho velona izy. Mahalalà azy.
Talantalana 5 hamoronana zorony maintso ao an-tranonao
Ny famoronana zorony maintso ao an-trano izay ahafahantsika mankafy ny ety ivelany ao an-trano dia tena mora amin'ireo talantalana ireo.
Ny lakilen'ny fikandrana mahomby amin'ny angovo
Fantatrao ve ny lakilen'ny fanatontosana ny varavarankely mahomby amin'ny angovo? Androany dia mizara aminareo dimy izahay hisorohana ny fahaverezan'ny hafanana.
Inona no vokatr'izany amin'ny biby fiompy?
Fantatrao ve ny fiantraikan'ny fihazonana amin'ny biby fiompy? Eto izahay dia mampiharihary toro-hevitra vitsivitsy tsy tokony ho adino, satria mijaly koa izy ireo.
Karazan-tady lamba famaohana 4 handravahana ny trano fidiovana
Misy karazany maro ny talantalana lamba famaohana handroahana ny trano fidiovana. Androany dia mizara karazana efatra aminao izahay, mampiseho aminao safidy isan-karazany ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Fikarakarana fototra ny zavamaniryo amin'ny lohataona
Ny lohataona no fotoana lehibe ananan'ny zavamaniry. Fotoana hikarakarana azy ireo izao, hanomezana azy ireo fikarakarana fototra mahazatra an'ity vanim-potoana ity.
Ny tetika tsara indrindra hanadiovana ny efijery fandroana
Te hahafantatra ny tetika tsara indrindra ahafahana manadio ny efijery fandroana ve ianao? Atolotray anao eto izany. Azo antoka fa ho hitanao ny fahasamihafana lehibe!